Nispakhya National Weekly ( निस्पक्ष राष्ट्रिय साप्ताहिक ) online News Paper: पत्याउनुहुन्छ तपाईं, नेपालले अमेरिकालाई पछार्यो नि !
पत्याउनुहुन्छ तपाईं, नेपालले अमेरिकालाई पछार्यो नि !
नेपाल आइसिसी यु-१९ विश्वकप क्रिकेट छनोटमा उपविजेता बनेको छ। उत्तरी आयरल्यान्डमा भइरहेको प्रतियोगिताको मंगलबार अन्तिम दिनको खेलमा नेपालले अमेरिकालाई ९९ रनले पराजित गर्‍यो। नेपालसँगको हारपछि अमेरिका अर्को वर्ष अस्ट्रेलियामा हुने विश्वकपमा छनोट हुन सकेन। दिनको अर्को खेलमा आशाहीन भानुटुलाई १ सय ३० रनले पराजित गरेको स्कटल्यान्ड विजेता बन्यो। पहिलो खेलमा क्यानाडासँग पराजित स्कटल्यान्डले त्यसपछिका बाँकी ८ खेल नै जितेर विजेता बनेको हो। नेपालले ७ मा विजय र २ मा पराजयको नतिजा निकाल्यो। स्कटल्यान्ड र क्यानाडासँग नेपाल पराजित भएको थियो। पपुवा न्युगिनीसँग ५ विकेटले पराजित भएपछि आयरल्यान्ड दोस्रोबाट तेस्रो स्थानमा झर्‍यो। स्कटल्यान्ड, नेपाल र आयरल्यान्डले यसअघि नै यु-१९ विश्वकपमा स्थान सुरक्षित गरिसकेको अवस्थामा अन्तिम दिनको खेलबाट अफगानिस्तान, पपुवा न्युगिनी र नामिबियाले शीर्ष तीन टोलीलाई पछ्याए। युरोप र एसियाबाट छनोट चरणमा २-२ टोलीले स्थान बनाए। अफ्रिका र ओसिनियाबाट १-१ टोली यु-१९ विश्वकपमा छानिए। अमेरिकी क्षेत्रका दुई टोली अमेरिका र क्यानाडा छनोटबाटै बाहिरिएका छन्। छनोट भएर गएका ६ टोलीले टेस्ट खेल्ने १० राष्ट्रसँग विश्वकपमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। लिमाभ्दी क्रिकेट क्लबमा मध्यपंक्तिका ब्याट्सम्यान नरेश बुढाऐर र
प्रदीप ऐरीको अर्धसतकमा नेपालले निर्धारित ५० ओभरमा ९ विकेट गुमाई २ सय ६४ रन बनायो। ४४.१ ओभरमा १ सय ६५ रनमा सीमित भएपछि अमेरिकाको लगातार दोस्रोपटक यु-१९ विश्वकप खेल्ने सम्भावना सकिएको हो। ‘हामी विश्वकपमा छनोट भइसकेको भए पनि अमेरिकासँग जसरी पनि जित्न खेलेको थियौं। अन्तिम दिनको खेल जितेर हामी अन्तिम कम्तीमा दोस्रो हुन चाहन्थ्यौं,' नेपालका प्रशिक्षक जगत टमाटाले नागरिकसँग टेलिफोनमा भने, ‘पूरा प्रतियोगिताबारेमा भन्नुपर्दा हाम्रा खेलाडीको प्रदर्शनको तारिफका लागि शब्द छैन। सानोतिनो चोटलाई पनि उनीहरूले मतलब गरेनन्। मैदानमा उनीहरूले धेरै मेहनत गरे। क्यानाडासँग पानीले बिथोलिएको खेल हार्नु हाम्रो दुर्भाग्य हो। नत्र भने हामी उपाधि जित्थ्यौं।'
कप्तान पृथु बाँस्कोटाले पनि क्यानाडासँग कमजोर प्रदर्शन गर्नुपरेकाले उपाधि गुमाउनुपरेको बताए। उनले भने, ‘पहिलो दुई खेलमा ब्याटिङमा केही समस्या देखिए पनि पछि खेलाडीले राम्रो खेले।'
नेपाली टोलीका व्यवस्थापक छत्रप्रसाद अधिकारीले भने, ‘मेरा लागि नयाँ अनुभव भए पनि यहाँ खेलेका सबै टोली बराबर भएको पाए। हामीले त्यसमा धेरै सिक्यौं।'
नरेश र प्रदीपले पाँचौं विकेटमा १ सय १३ रन जोड्दा नेपालले अन्तिम १० ओभरमा १ सय १३ रन बटुली प्रतियोगितामा टोलीको दोस्रो ठूलो उच्च स्कोर बनाएको थियो। ७८ रन बनाउँदा सागर पुन (१), फैजलुर रहमान (२६), कप्तान पृथु (२) र राजेश पुलामी (१६) लाई गुमाइसकेको अवस्थामा नरेश र प्रदीपको विकेट जमेको थियो। दुवैले प्रतियोगितामा आफ्नो दोस्रो अर्द्धसतक पूरा गरे। नरेशले ७६ रनको इनिङ खेले। म्यान अफ द म्याच उनले ९४ बलको सामना गरी ५ चौका र ३ छक्का प्रहार गरे। प्रदीपले ५७ रन बनाउँदा ६७ बल खेली ३ चौका र ३ छक्का प्रहार गरे।
नरेश ४४औं ओभरमा आउट भएपछि यो साझेदारी टुटेको थियो। ४६औं ओभरमा अनिवार्य ब्याटिङ पावर प्ले लिएको नेपालले दोस्रो बलमै राहुल बिकलाई ९ रनमा गुमायो। प्रदीप पनि अर्को ओभरमा आउट भए। कृष्ण कार्कीले खुला सटहरू प्रहार गर्दै १७ बलमा ४५ रन बनाए। उनले ४ छक्का र ३ चौका प्रहार गरे। भुवन कार्की दोस्रो बलमै रनआउट भए भने रुपेश श्रीवास्तव ६ रनमा अविजित रहे।
अविनाश कर्णले पहिलो बलमै दुई विकेट लिएपछि अमेरिकाको खेल जित्ने सम्भावना स्टेभन टेलरमा मात्र निर्भर थियो। मंगलबार पनि ५२ रनको इनिङ खेल्दै उनले प्रतियोगितामा ४ सय ५० रन बनाए। पृथुको अफ स्टम्प बाहिरको बल छाड्दा बोल्ड भएपछि टेलरको ५८ बलमा ७ चौका र १ छक्काको इनिङ रोकिएको थियो।
सलमान अहमदले ३८ रन बनाई नेपाली बलरको केही प्रतिरोध गरे पनि उनलाई राहुल बिकले बोल्ड गरे। पुछारको थप तीन विकेट थप्दै राहुलले खेलमा ४ विकेट लिए । उनले त्यसका लागि ८.१ ओभरमा २ मेडन राख्दै २४ रन खर्चे। उनले प्रतियोगितामा २१ विकेट पुर्‍याएर एउटै प्रतियोगितामा सबैभन्दा बढी विकेट लिने आफ्नै नाममा रहेको नेपाली कीर्तिमानलाई बराबरी गरे। फेब्रुअरीमा थाइल्यान्डमा भएको एसिसी यु-१९ इलाइट कपमा पनि राहुलले २१ विकेट लिएका थिए। राहुलबाहेक मंगलबार अविनाश र पृथुले २-२ तथा कृष्ण र सागर पुनले १-१ विकेट लिए। नेपाली टोली शुक्रबार स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ।